Daawo Gen Caanood Oo Ku Eedeeyay Maamulka Shabeelaha Hoose Inay La Shaqeeyaan Alshabaab – Hornafrik Media Network
Abaanduulaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyam Cabdullaahi Cali Caanood ayaa marka hore sheegay in Shacabka dega Gobolka Shabeellaha Hoose lagu abuuray in ciidamada xoogga dalka ay yihiin kuwa cadaw ah oo dadka dhiba isla markaana Isbaarooyin dhigta.
Waxa uu sheegay in ay jiraan Shaqsiyad dadka ku shubaya fikirka Al-Shabaab si ay borobogaando uga abuuraan ciidamada,isla markaana dadka Shaqeynaya Dacaayadaas ay yihiin kuwo xiriir la leh Shabaab, isagoo u isticmaalay Erayga ah Alshabaab La Shaqeeyayaal.
Sidoo kale waxa uu Janaraalku intaas raaciyay in degmooyin badan oo ka tirsan Shabeellaah hoose dad lagu dhibaateeyay sida in qaraxyo loo dhigay ciidamada, sidaas daraadeedna Shacabka aysan ka hadlin iyaga oo ku bedelay Warar lagu shubay ee ah in ciidamada xoogga ay yihiin dad xun oo Isbaarooyin dhigta, iyo in Joogistoodu ay abuurayso Dagaalo dhex mara iyaga iyo Alshabaab.
Isaga oo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in Maamulada qaar ay yihiin kuwa ku Shaqeeya fikirada Shabaab, isla markaana ay Xiriir la leeyihiin Kooxda Alshabaab, isagoo tusaale u soo qaatay Maamulka Shabeelaha Hoose, Wuxuuna uga digay Maamulkaasi inay sii wadaan La Shaqaynta ay la leeyihiin Kooxda Alshabaab, taasoo uu ugu goodiyay inay ka dhalan karto in tallaabo laga qaado.
Caanood waxa uu ku hanjabay in cid kasta oo neceb Ciidanka Xoogga inay u aqoonsanayaan Alshabaab, taasoo ka dhigan inay ula macaamilaan sida Cadow Dagaal.
Maamulka Koonfur Galbeed oo ka arrimaya Shabeelaha Hoose ayaan ka hadlin eedayntan uga timid Ciidanka Xoogga.
Halkan ka Daawo Gen Caanood